Dhaqdhaqaaqyada Macluumaadka Muuqaalka Guatemala - Geofumadas
Mee, 2009 Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, GvSIG, tabo cusub, Maamulka Land
Dib-u-socodka Qorshaha Xogta Muuqaalka Guatemala, kaas oo diyaarinaya Xoghayaha Guud ee Qorsheynta iyo Barnaamijka Miisaaniyadda SEGEPLAN, waa mid xiiso leh.
Waxaan ku aragnay muuqaalka bandhigga Moisés Poyatos iyo Walter Girón ee SITIMI 4tas. gvSIG maalmood; dhamaadka bandhigga, waxay sheegeen in IDEs ay ahaayeen mowduuc kulul oo ku yaal Guatemala laakiin illaa iyo imika aysan soo bandhigin wax sharrax ah. Hadda waxay ku sameeyeen liistada boosteejada gvSIG, waxaanan u maleynayaa inay u qalantaa in la aqoonsado in ay tahay shaqo fiican oo bilowday, inkastoo Jean-Roch Lebeau ii sheegay wax yar.
Waa hagaag, SEGEPLAN wuxuu dhigaa gudaha deegaanka cusub Sharciga Amarka Degaanka si kor loogu qaado horumarinta Istaraatiijiyada Macluumaadka Muuqaalka Guatemala, oo xiiso leh inay si dhab ah u tixgeliyaan Software Free. Isticmaalahan Prototype:
Postgre (Juqraafi Qaabka POSTGIS)
gvSIG loogu talagalay jiilka qoraallada adeegyada qaaska ah
Apache loogu talagalay server web
Khariidadaha sida mashiinka Khariidadaha
Mapbender sida macaamil khafiif ah.
iyo daabacaadda GEONETWORK Metadata Module waa geedi socod.
Tani waa mid aad u qiimo badan iyo tixraac wanaagsan oo loogu talagalay Gobolka Central American codsiyada kale waxay leeyihiin gaaban, ma aha oo keliya wixii macneheedu yahay maalgashiga software ee macaamiisha laakiin loogu talagalay dhadhanka heerarka OGC. Si aad u aragto sida nidaamku u shaqeeyo:
Weli lama magacaabin magac la yidhaahdo aqoonsi shirkad, waxaan u maleyneynaa inuu ka mid noqon doono Sinit; sababtoo ah heerka sheyga ayaa ah cinwaanka xiriirka ee hadda aad haysatid, http://ide.segeplan.gob.gt/ , waxaa soo galay user iyo password "fikrado" iyo sidaas oo ay leedahay muuqaal ah macluumaadka garaafka.
Soo qaado layers
Halkan waxaa ka mid ah xogta aad u adeegtay waxaad dooran kartaa xayawaanka, qalabka sare ee orthophotos iyo waaxyo. Marka lakabka la doorto waxaad dooran kartaa lakabyada la heli karo iyo kuwa hoos ku qoran ayaa ah tabaha loo yaqaan legends, print iyo raadinta.
Looxyada sare waxaa jira waxqabadyo aasaasi ah ee habka iyo soo-dejinta laakiin waxaa kale oo jira waxyaabo kale oo xiiso leh sida loading of layers wms:
Si ay u noqdaan kuwan:
Si aad u soo dhowaato
Si aad udheesho
Sawir hore hore
Kudar wms liiska filimka **
Ku dar wms
Iska xakamee sigaarka. **
Muuji faahfaahinta ku saabsan wms
Hadda, kuwa lagu calaamadeeyey xiddigta waxay leeyihiin qalad barnaamij qalin ah maxaa yeelay waxaa loo gudbiyaa maxaliga ah oo aan ahayn server websaydh. Waxa kale oo ay ka maqan yihiin qaar ka mid ah cidhib-tirka codsiyada jilayaasha aan u ogolaaneynin inay si fiican u arkaan warqadda ñ ee "ku dar".
Keydee faylka sida mawduuca map map
Kudar farta galka faylka map-ka
Manhajka Manhajka Tusmada
Isku xiro Google Earth
Nidaamku wuxuu fursad u helayaa inuu isku xiro xogta wfs ama wms; sidaa darteed barnaamij kasta oo taageera adeegyada caadiga ah OGC ayaa ku dhejin kara (GvSIG, ArcGIS, AutoDesk 3D, Bentley Map, kala cayncayn ah GIS, Cadcorp, iwm.)
Aan aragno sida, tusaale ahaan, nidaamyada sida Google Earth lagu dari karo nidaamka:
Waxaan dooneynaa inaanu ku darno, sawir muuqaal ah, ka dibna doorta "Update" tab oo waxaa jira xulasho "xuduudaha xakamaynta". Ka dibna ku dar url:
REQUEST = GetMap & SERVICE = WMS & LAYERS = Degmooyinka,
Departments_850, Portfolio_Areas.shp, Hay'adaha Biyaha, Madaxda
Departamentales_800, Rios_200, Wadooyinka, Wadooyin
Asphalted_850 & STYLES = ,,,,, & SRS = EPSG: 42500 & BBOX = 420673.5340388007,
TRUE & LAYLIKA = codsiga / vnd.ogc.se_inimage
Tan waxaa laga heli karaa cinwaannada kala duwan ee lakabka metadata mapbender (laga bilaabo badhanka roodhida). Waxaa jira urls badan oo ka mid ah lakabyada kale ee la heli karo.
Marka la geynayo nidaamku wuxuu u oggolaanayaa inuu doorto lakabyada aan dooneyno inaan aragno iyo amarka
Oo diyaarna u ahaatay:
Intaa waxaa dheer, waxaan kugula talineynaa in aad fiirsato maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo lagu muujinayo mashruucan.
Post Previous«Previous Jacaylka ku jira Twitter Times
Post Next Teknoloojiyada: shirkaduhu way socdaan, shirkadaha yimaadaanNext »
7 Jawaab ah "Qalabka Macluumaadka Meelaha Guatemala"
Waqtigan xaadirka ah ee mashruucan rajo-gelinta ah, wax yar ayaa u eg waxa ku qeexan dib-u-eegista.
Bond Nelson isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan sameynay si aan u yareyno culeyska '30 sec' ilaa 9 sec qiyaasta waxay ahayd inaan ka eegno dulmarno kala duwan oo aan u adeegin mosaics sida aan hadda sameyneyno waxaan u adeegnaa ortos-ka shaqsiyeed ee markasta la adeegsada hababka Tilingatte.
Byron Bobadilla isagu wuxuu leeyahay:
Tan iyo bilowgii SDI ee Guatemala by xoghaynta qorshaynta iyo barnaamijka madaxweynenimada ayaa sameeyey dhowr isbeddel, hadda waxaa jira qayb ka mid ah adeegyada khariidadaha ama WMS, videos ku saabsan sida loo xariiro adeegyadan, iyo bandhig dhammaystiran oo cusbooneysiin ah IDE cusub wuxuu hayaa macluumaad ka yimid hay'ado kala duwan sida MAGA, IGN, INE, iwm. Waxyaabahan oo dhan http://ide.segeplan.gob.gt
Waan tijaabiyay, waxayna u muuqataa inay aad u dhaqso badan tahay si ay u muujiso sawirada.
Weli waxaa jira walaac isdabajoog ah oo ku jira miiska xeerka leh dhawaaqa
Walter Giron isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan sameynay si aan u yareyno culeyska '30 sec' ilaa 9 sec qiyaasta waxay ahayd inaan ka eegno dulmar dhinacyo kala duwan ah oo aan u adeegno mosaics sida aan sameyneynay hadda waxaan u adeegnaa ortos shaqsiyadeed marwalba oo la raacayo geedi socodka 'Tiling'
Haa, waxaan u malaynayaa in Tilecache ay tahay baxitaan, waa inaan sidoo kale tashanaa xalalka kale ee Metacarta sida Open Layers.
Shaqo aad u fiican iyo si aad u fiican baaritaankaaga.
Maanta waxaan ka fikiray tilecache si loo dardar geliyo orthophotos. (tilecache demo)
Miyuu u shaqeeyaa oo keliya geoserver ama miyaa lagu hirgelin karaa khariidadaha?
In IDE ee Argentina isticmaali Landsat iyo sidoo kale daahiyo download.